Boobka ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka K/Afrika oo noqdey tusbax afka laga furay – SBC
Boobka ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka K/Afrika oo noqdey tusbax afka laga furay
Posted by editor on Juun 15, 2011 Comments
Waxaa mar kale boob baahsan loo geystay ganacsi ay leeyihiin muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku yaalo magaalada rustenberg ee dalka koonfur afrika sida ay xaqiiiyeen muwaadiniin soomaaliyeed oo halkaa ku sugan.
Boobkan ayaa yimid ka dib markii ay isku soo bexeen dadweyne careysan oo u dhashay dalkaasi oo ka cabanayay biyaha iyo korontada oo laga jartay. Gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida ee gobokaas C/raxmaan Ukun ayaa shaaciyay in la boobay in ka badan 5-dukaan, isla markaana wali ay jirto cabsi ku wajahan soomaalida maadaama wali ay socdaan mudaharaatyada.
Waxaa abaabada la iskugu laabay ganacsi badan oo Soomaalida ay ku leheed halkaa maadaama laga yaabo in dadkan ay sii wadaan mudaharaatyada. Wai ma jirto waxa ka soo baxay dowlada koonfur afrika oo ku aadan dhibaatadan mar kale soo cusboonaaday, balse waxaa lagu wadaa in booliska uu baaritaan ku sameeyo arintan maalmaha soo socdo.
Isbuucyo ka hor ayey eheed markii boob ba’an oo geystay ganacsi Soomaaliyeed gobolka eastern cape gaar ahaan port elezebeth walina ma jirto wax magdhow ah oo la siiyay dakii ay wax yeelada ka soo gaartay.